Home > COVID-19 Information > Information For OMC Patients > March 18, 2020 - Message from Randy Hemann, MD, Chief Medical Officer > Maarso 18, 2020 Fariin Idinkaga Timid Randy Hemann, MD, Madaxa Caafimaadka
Xarunta Caafimadaka ee Olmsted waxa ay si joogta ah ula socotaa xaaladda cudurka khatarta ah ee COVID-19 iyada oo sidii aad nooga barateen, aan muhimadda ugu sareysa siineyno nabadgelyada bukaankeena, shaqaalaheena iyo bulshada.
Waxaanu la soconeynaa oo qiimeyneynaa inta ay qaadi karaan dhismayaasheena, shaqaalaheena iyo agabka aan heysano inaga oo la shaqeyneyna Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Olsmted, Mayo Clinic iyo qeybaha kale ee bulashada ee qiimeynta ku sameynaya gurmadka cudurka faafa ee COVID-19.
Laga bilaabo Isniinta 23ka Maarso 2020 xarunta Caafimaadka ee Olmsted waxa ay dib u dhigeysaa qaliimada iyo daaweynta aan muhimka aheyn ugu yaraan sideed todobaad haddii aanu dib u dhigaas dhibaato ku aheyn xaaladda caafimaadka ee bukaanka. Shaqaalaha caafimaadka ayaa xaaladwalba gooni ahaanteed u qiimeynaya oo laxiriiraya bukaanka si ay u xaqiijiyaan balanta ama balanta qaliinka ama daaweynta ugu bedelaan. Qaliinada iyo daweynta degdegga ah waxaa lagu sameynayaa goobaheena kala duwan. Waxaanu kale oo aanu dib u eegeynaa balamada soosocda, iyo bukaanka laga yaabo in dhakhtarku telefoonka kula hadli karo, koombiyutarka kugula kulmi maro, ama fiidyoow internetka aad kuwada xiriiri kartaan oo keydka OMC. Shaqaalaha OMC waxaa ka go’an inay xaqiijiyaan nabadgelyada bukaanka iyo shaqaalaha. Waxaa kale oo aan la shaqeyneynaa Shaqaalaha OMC iyo bulshada si loo xaqiijiyo agabka loo heli karo bukaanka, ee gurmadka OMC ee cudurka COVID-19, daddaalka bulshada ee ku jeeda COVID-19.
Shaqaalahayagu waxa ay ka shaqeynayaan in bukaanku helaan daryeelka ay u baahan yihiin, marka ay u baahan yihiin. Telefoonada badan oo na soo wacaya darteed, waxaa suurogal in bukaanku telefoonka ku jiraan waqti ka badan kii caadiga ahaa. Waanu idinkaga mahad celineynaa dulqaadka aad muujiseen xilligan aad u adag. Waxaanu bukaankayaga ka codsaneynaa in ay bogeena i9nternetka kala socdaan macluumaadkii soo kordha.
OMC waxa ay xadidieysaa booqashada dhamaan dhsimayaasha caafimaadka si loo sugo caafimaadka bukaanka iyo shaqaalaha. Fadlan tixraac tilmaamaha wixii macluumaad ee dheeraad ah.
Waxaanu ka codsaneynaa bukaanka iyo qoysaskooda in ka taxadaraan caafimaadkooda iyo caafimaadka dadka kale. Xarunta CDC waxay ay so saartay macluumaad tilmaamaya sida qofku isu ilaalin karo, u qorsheyn karo iyo waxyaabaha uu sameynayo haddii uu xanuundsado.
Tuyet A. Hak, APRN, CNP